वरिष्ठहरूका लागि हाम्रो भिडियो फोनको बारेमा प्रशंसापत्रहरू - Konnekt
अरूले के भनिरहेका छन्
हेर्नुहोस् समीक्षा उद्योग पेशेवर र प्रविधि विशेषज्ञहरु द्वारा, वा स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ताहरु र ग्राहकहरु बाट प्रशंसापत्र को लागी तल पढ्नुहोस्।
भिडिओफोनले जुडीको जीवन बचाउन मद्दत गर्दछ
यदि यो थिएन भने Konnekt भिडियो फोनले मेरो आमालाई कल्पना गर्न मद्दत गर्दै, म पक्का निश्चित छु कि मेरो आमाको मृत्यु भइसकेको थियो…
- चेरिल कोल्फ, जुडीको छोरी / सेवानिवृत्त नर्स
चेरिल र जुडीको कहानी पढ्नुहोस् ...
मेरी year 84 बर्षेली आमालाई अल्जाइमर रोग छ। आमा an 55 भन्दा बढी अवकाश गाउँ अन्तरराज्यीयमा स्वतन्त्र रूपमा बस्नुहुन्छ। उनी आपतकालिन सहायता बटन "केवल केसमा" लगाउँछिन्।
सेप्टेम्बरमा म आमालाई भेट्न गएको थिएँ र उनलाई तीव्र आंत्र समस्याको साथ बिरामी भेटें। आमाले कसैलाई पनि उनी अस्वस्थ भएकी थिइनन्, वा कि उनले धेरै दिनसम्म खाइन वा तरक्सी पिएकी थिइन। यो बिरामीले घरलाई नै असर गर्यो कि आमा कती नाजुक भइरहेको थियो।
मँ केही हप्ता पछि विदेश यात्रा गर्नु पर्ने थियो त्यसैले ममलाई सहयोग गर्न केहि उपायहरू लागू गरें। एक उपाय एक भिडियो फोन बाट थियो Konnekt जसले मलाई उनीसँग स्काइप प्रयोग गर्न दिनेछ र आमाको लागि प्रयोग गर्न सजिलो पनि थियो। म आमालाई भेट्न सक्षम हुन चाहन्थें किनभने उहाँ टाढा भएको बेला परिवार, साथीहरू र जीपीलाई बताउने उनको क्षमतामा अत्यन्तै मेहनती भएकी थिइन र अस्वस्थ महसुस गरिरहनुभएको थियो।
जब मैले अष्ट्रेलिया छोडें, आमालाई ठीक लागिरहेको थियो। तीन हप्ता पछि हामीले भिडियो फोनमा कुरा गर्यौं र उनले भने कि उनको पेटमा दर्द भयो। खुसीको कुरा उसले त्यो जीपीलाई आफैलाई लैजान्छ। दुर्भाग्यवश, उसले आदेश दियो कि एक्स-रे प्रक्रिया एक हप्ता वा त्यस पछि उपलब्ध थिएन र मम उसलाई सूचित गर्न सक्षम भएन किनकि उनी सप्ताहन्तको लागि घर गएका थिए। त्यस पछि सप्ताहन्तमा स्काइप सत्रहरूले मलाई दृष्टिबाट आमाको अवस्था जाँच गर्न सक्षम पार्यो: उनी स्थिर देखिन्।
मैले उनको स्काईप मार्फत सोमबार बिहान अस्ट्रेलियाको समयमा फोन गर्ने निर्णय गरें कि उनको अचूक एक्स-रे अपोइन्टमेन्ट मिति पत्ता लगाउनको लागि ताकि म उनको जीपीलाई पहिले देखिनको लागि धक्का लगाउन सक्छु। मसँग आमाको भिडियो फोन कन्फिगर गरिएको छ त्यसैले यदि उसले जवाफ नदिएमा जे भए पनि खुल्यो, मलाई के हुँदैछ हेर्न अनुमति दिदै। यस अवसरमा आमाले जवाफ दिइनन् र भिडियो फोन स्वचालित रूपमा खुल्दै गयो जस्तो कि उसले हेराईमा आएको थियो। म उनी धेरै अस्वस्थ देखिन्छु र एम्बुलेन्स को स्पष्ट आवश्यकता थियो देख्न सक्थे। लामो कथा छोटकरीमा काट्न, भिडियो फोनले मेरो नर्सिंग कौशल प्रयोग गर्न मेरो आमाको मुल्या assess्कन गर्न र उनको पेटलाई सम्भाव्य रूपमा अवरोध गरिएको थियो र त्यो निर्जलित थियो भनेर निर्धारण गर्न अनुमति दियो। उसको उमेर र मुटुको समस्याका कारण आमाले सम्भावित प्रकोपको घटनातिर बढ्दै गएको थियो।
भिडियो फोनले मलाई मेरो आमाको निरीक्षण गर्न र प्यारामेडिकहरू आउने बखत उनको सान्त्वना दिन अनुमति दियो। यसले मलाई प्यारामेडिक्सलाई बताउन पनि अनुमति दियो कि उनीहरूले उनलाई आकस्मिक विभागमा लैजाउनु अघि उनको मूल्या as्कन गरे। आमालाई मल त्यागको निदान गरिएको थियो र त्यस दिन शल्यक्रिया गरियो।
यदि यो थिएन भने Konnekt भिडियो फोनले मेरो आमालाई कल्पना गर्न मद्दत गर्दै, म पूर्ण विश्वस्त छु कि मेरी आमाले उनको इकाईमा 24-48 घण्टा भित्र एक अत्यन्त भयावह मृत्यु हुने थियो किनभने उनको भर्खरको व्यवहारले उनलाई कसैलाई नभई ऊ कस्तो महसुस गरी रहेकी बताई।
तल्लो-अनुहार जोडिएको तल्लो तनावमा
वयस्क वयस्कहरूको लागि डिप्रेसनका लक्षणहरू विकास गर्ने सम्भावना निरन्तर बढ्दै जान्छ किनकि आमने सामनेको सामाजिक सम्पर्कको आवृत्ति घट्छ। हाम्रो अनुसन्धानले देखायो कि यस्तो प्रभाव फोन, लिखित, वा ईमेल सम्पर्कको लागि अवस्थित थिएन। यसको मतलब के हो? सामाजिक अलगाव तपाईंको मानसिक स्वास्थ्यको लागि खराब छ, र नियमित अनुहार बाट सामाजिक अन्तरक्रिया सम्भवतः उदासीनता रोक्न मद्दतको लागि एक उत्तम तरिका हो।
- प्रो Alan Teo, एमडी, एमएस, मनोचिकित्सा, ओरेगन स्वास्थ्य र विज्ञान विश्वविद्यालयको सहायक प्राध्यापक
कम चिन्ता, अधिक व्यक्तिगत
आमा र बुबासँग आमनेसामने कुरा गर्न पाउनु ठूलो भएको छ - विशेष गरी जब उनीहरू बिरामी छन्, वा म त्यहाँ त्यति धेरै हुन सकेको छैन। यस्तो देखिन्छ कि उनीहरूको अनुहार हेरेर धेरै व्यक्तिगत देखिन्छ।
- आदरणीय ग्रेग Allinson, सेंट मार्क क्याम्बरवेल को विकार
आमा हामीलाई हेर्न मन पराउनुहुन्छ
Konnekt मममा व्यक्तिगत भेटघाटहरूको बीचको समय ब्रिजिंग गर्न धेरै सहयोगी भएको छ। उनी मलाई र अन्य टाढा ठाउँका अनुहारहरू हेर्न मन पराउँछन्।
आमा प्राय कुनै पनि प्रकारको टेक्नोलोजी वरिपरि सुपर असहज हुन्छ Konnektको चरम सादगीले यसलाई यत्तिको सजिलो, पहुँचयोग्य र मम नेभिगेट गर्नका लागि रमाईलो बनाएको छ। म यो अत्यधिक सिफारिश गर्न सक्दिन।
- सीन Whelan, समर्पित छोरा
BUPA वृद्ध देखभाल
मलाई मेरो छोरो क्वीन्सल्याण्डमा देख्न मन पर्छ, र परिवार र साथीहरूसँग सम्पर्कमा रहनु मेरो अन्य फोन भन्दा धेरै सजिलो छ। टच स्क्रिनमा ठूला बटनहरूले मलाई याद दिलाउँदछ कि मसँग अस्ट्रेलियाका धेरै परिवार सदस्यहरू र साथीहरू छन् जुन म कल गर्न सक्छु।
- ग्राहम क्रिस्टी, निवासी
ब्रिज ग्याप, मलाई आराम गर्न दिन्छ
बुबाले देख्न पाउनु भएको कारण टाढाको जीवन को दूरी पुलहरू भयो। Konnekt भिडिओफोनले आराम गर्न र सम्पर्कमा रहन यो सम्भव बनाउँदछ जब म विश्वको कुनै पनि ठाउँमा काम गर्दैछु।
- ग्राहमको छोरा, ब्रिस्बेन
कम एकाकी, कमजोर सुनुवाईलाई जित
यो Konnekt भिडियो फोन प्रणालीले वास्तवमै बुबालाई साथीहरू र परिवारसँग राम्रोसँग सम्पर्क गर्न मद्दत गरेको छ। जब उहाँ बहिरो हुदै हुनुहुन्छ, कलरले उनलाई ओठ पढ्न मद्दत गर्दछ, ध्वनि भोल्युम बलियो छ र टोन मानक मोबाइल फोन भन्दा स्पष्ट छ। साथै, उसले फोन नम्बर याद गर्नु पर्दैन! प्रणालीको सरलताले उसलाई परिवार र साथीहरूसँग बढी सम्पर्कमा रहन मद्दत पुर्‍याउँछ र एक्लोपन र एक्लोपनको भावनालाई कम गर्दछ।
- वेंडी विन्टरसगिल, पंजीकृत नर्स (आरएन), ग्राहमको छोरी
क्लिक गर्नुहोस् वेंडीको कथा पढ्नुहोस्
अपा Res्गताको लागि रातभर समर्थन
श्रवणशक्ति हराउने व्यक्तिले भिडियोफोनमा कुराकानी गर्न सा language्केतिक भाषा वा भिजुअल कार्डहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्, दुबै स्टाफको साथ र उनीहरूको नेटवर्कमा अन्य व्यक्तिहरू जस्तै आमा बुबा, मित्र र छिमेकीहरू।
- जोडी डी, सहायक टेक्नोलोजी डेभलपर, कम्युनिटि लिभिंग सोसाइटी, भ्याकूवर क्यानाडा
जुडीको कथा पढ्नुहोस् ...
यो समुदाय बस्ने समाज (सीएलएस) विकास अपा with्ग भएका व्यक्ति वा मस्तिष्कमा चोटपटक भएका व्यक्तिको पूर्ण नागरिकको रूपमा अर्थपूर्ण जीवनको लागि समर्थन गर्दछ। सीएलएसले क्यानाडामा बहु इकाईहरू र अपार्टमेन्ट ब्लकहरू प्रबन्ध गर्दछ जुन स्वदेशी रहन्छन्। केही बासिन्दाहरूसँग अन्य अपा .्गहरू हुन्छन् जस्तै एक गतिशीलता कमजोरी, श्रवणशक्ति वा आवाज कमजोरी, वा पूर्ण बहरापन।
बासिन्दाहरूले रातारात समर्थन स्टाफको सहयोग अनुरोध गर्न पुरानो पेजर प्रणाली प्रयोग गरिरहेका थिए। प्रणाली केवल कल गर्ने कुराकानी भयो। त्यहाँ आवश्यकताको छिटो मूल्यांकन गर्न कुनै प्रभावकारी तरीका थिएन, बहुविध कलरहरू भएपछि प्राथमिकता दिनुहोस्, वा अनावश्यक भ्रमणहरू बेवास्ता गर्नुहोस्।
Konnekt भिडियोफोन्सले प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्‍यो, कर्मचारी र समर्थित व्यक्तिहरू बीच 2- तरीका भिडियो जडान सक्षम गर्ने। तीनै कमजोर गतिशीलता सहितले पहुँच स्विचहरू प्रयोग गरेर कल गर्न वा जवाफ दिन पनि सक्छन्। श्रवण अक्षमता भएकाहरूको लागि, भिडियो कल अन्य कोठामा बत्तीहरू बन्द गर्दछ जब आगमन कल हुन्छ।
अब, समर्थित व्यक्तिहरूले तुरून्त देख्न र उनीहरूको रातको स्टाफसँग कुरा गर्न सक्दछन्, उनीहरूले उनीहरूको आवश्यकताको कुराकानी गर्न सक्दछन्, र कहिलेकाँही घर भ्रमण बिना समस्या समाधान गर्न सक्छन्। समर्थित व्यक्तिहरूले स्टाफबाट पनि सुन्न सक्छन् कि तिनीहरू आफ्नो बाटोमा छन् वा, यदि कर्मचारी अर्को काममा व्यस्त छन्, कि उनीहरू सकेसम्म चाँडो उनीहरूको बाटोमा हुनेछन्।
पुरानो पेजर प्रणालीको विपरीत, कर्मचारीहरूले देख्न सक्छन् कि सबै उपकरणहरू अनलाइन छन् समर्थित व्यक्तिको कोठामा प्रवेश गर्न आवश्यक बिना नै। सब भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि जब कसैले कल गर्दछ, स्टाफले तुरून्त देख्न सक्दछ कि सहायता आवश्यक छ कि छैन र हेरचाहलाई प्राथमिकता दिन सक्षम छन्।
- जोडी डी, सहायक टेक्नोलोजी विकासकर्ता, सीएलएस, भ्याकूवर, क्यानडा
स्वतन्त्रता, समर्थन र मित्रता
भिडियोफोनले क्रिस र उसका साथीहरूलाई उनीहरूको अपार्टमेन्टहरू बीच सजिलै च्याट गर्न मद्दत गर्दछ र एक अर्कालाई उनीहरूको व्यक्तिगत क्षमता र सीप प्रयोग गरेर मद्दत गर्दछ, जबकि तिनीहरू बढी स्वतन्त्र हुन सिक्छन्।
- जुडी डी, सहायक टेक्नोलोजी विकासकर्ता, सीएलएस
क्रिसको कहानी पढ्नुहोस् ...
क्रिस एक युवा मानिस हुन् जो भर्खर पहिलो पटक आफ्नै लागि बाहिर सर्दै थिए। भ्यानकुभरमा रहेको आफ्नो कम्युनिटी लिभि Society सोसाइटी (सीएलएस) अपार्टमेन्टमा, क्रिसले आफ्नो परिवारसँग सम्पर्कमा रहन र उहाँसँगै छिमेकी अपार्टमेन्टमा लागेका साथीहरूसँग कुराकानी गर्न एक भिडियोफोनको प्रयोग गरे। समूहले समान उत्तेजना र चिन्ताहरू साझा गर्दछ, र एक अर्काको लागि ठूलो समर्थन हो। भिडियोफोन्स, तिनीहरूको सजिलो जडानको साथ, यी साथीहरूलाई उनीहरूको अपार्टमेन्टहरू बीच सजिलै च्याट गर्न सक्षम गर्दछ र एक अर्कालाई तिनीहरूको व्यक्तिगत क्षमता र सीप प्रयोग गरेर मद्दत गर्दछ, जबकि तिनीहरू बढी स्वतन्त्र हुन सिक्छन्।
आफ्नो भिडियोफोनको साथ, क्रिसले आमालाई फोन गर्न सक्छिन् कसरी उनको मनपर्ने बिहानको नास्ता बनाउन भनेर, वा स्टाफलाई बोलाउन बाथरूममा चुहावट पाइपको बारेमा के गर्ने भनेर सोध्नुहोस् जब यो आपतकालमा परिणत हुन्छ। राती उसको ओछ्यानमा एउटा बटन छ जुन उसलाई उसको आमासँग जोड्दछ जो केहि ब्लाकहरू टाढा बस्दछ। तिनीहरू एक अर्कालाई हेर्न र सुन्न सक्दछन्, यदि आमा अनुपलब्ध छन् भने, भिडियोफोनले स्वचालित रूपमा क्रिसको सहयोगी स्टाफलाई सहयोगको लागि कल गर्न सक्दछ।
लकडाउन: दूर खाना साझेदारी गर्दछ
अब यात्रा गर्न नसक्दा उनी सर्बिया र बुल्गारिया, युरोपमा आफ्ना परिवार र साथीहरूसँग कुरा गर्न वा देख्न सक्षम छैनन् भनेर जान्न लगभग उदास हुन्छन्। तपाईं र तपाईंको टीमले मेरो श्रीमान् र मलाई सम्पर्कको लागि यी लक-डाउनहरूमा पनि सम्भव बनायो।
- Irena Miljkovic, पत्नी
इरेना र माइकलको बारेमा पढ्नुहोस् ...
म तपाईं र तपाईंको टीमलाई पर्याप्त धन्यवाद दिन सक्दिन किनकि मेरो श्रीमान् र मलाई यी लक-डाउनहरूमा पनि सम्पर्कमा रहन सम्भव बनायो।
मेरो श्रीमान् माइकल, हल्का पागलपनका कारणले अब फोन प्रयोग गर्न सक्दैन। उनी मेलबोर्न, अष्ट्रेलियाको एक नर्सि home होममा बस्ने छन्। कुनै यात्रा गर्न नसक्दा ऊ सर्बिया र बुल्गारिया, युरोपमा आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग कुरा गर्न वा हेर्न सक्षम छैन भनेर जान्न लगभग उदास हुन्छ। तब मैले यसको बारेमा पत्ता लगाए Konnekt र भिडियोफोन। जोन र उनको टोली धेरै सहयोगी, जानकार थिए र मेरो श्रीमान्को आवश्यकता अनुसार भिडियोफोन सेट अप गरे। हामी अत्यन्तै खुसी छौं। मेरो श्रीमान् धेरै खुसी हुनुहुन्छ किनभने उनीसँग प्रिय व्यक्तिहरूलाई हेर्ने र सुन्ने अवसर छ। र हामी एक अर्कालाई भेट्न र कुरा गर्न सक्छौं, खाना वा चिया "सँगै" खाँदा पनि। यी कोरोना भाइरस लक-डाउनहरू फेस अनुहार जडान हुनु महत्त्वपूर्ण छ, कम एक्लो महसुस गर्नका लागि। यो सबै व्यक्तिहरूका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी नर्सि homes होमहरूमा। धन्यवाद Konnekt! म सबैलाई भिडियोफोन सिफारिश गर्दछु।
इरेना मिलजकोभिक, श्रीमती
तपाईको अद्भुत सेवा को लागी धेरै धेरै धन्यवाद र ममको भिडियोफोनको सम्बन्धमा मद्दतको लागि। तपाईंको संचार, अन्तरक्रिया र अनुगमन प्रक्रिया यति सजिलो भएको छ।
यो मेरो आमा र मेरो काकीको प्रतिक्रिया र कुराकानी आज हेरीरहेको र सुनिरहेको थियो। तिनीहरूको स्वास्थ्य समस्याको कारण उनीहरूले केहि बर्षसम्म एक अर्कालाई देखेका छैनन्। तिनीहरूको लागि किलोमिटरको दूरीले यात्राको लागि गाह्रो बनाउँछ। तिनीहरू पर्दामा आफ्ना हातहरू छुने र एक अर्कालाई चुम्बन उडाएको देख्न अनमोल थियो। तपाईंसँग एक शानदार उत्पाद छ!
- हेलेन एन, हेरचाह गर्ने छोरी / भान्जी
टेलि-हेल्थ, दिमागको शान्ति
सबै खुशीको साथ चलाउन र भिडियोफोन नियमित रूपमा प्रयोग गर्न पाउँदा खुशी छ। काममा आयो जब मैले मेरो एक्सएनयूएमएक्स यो छोरालाई कसरी नानको नयाँ अक्सिजन मेशिन र नेबुलाइजर सेटअप गर्ने भनेर बुझाउनु पर्‍यो .. दृश्य र अडियोको साथ सजिलो मैले फोनमा गर्नुपर्ला भन्दा।
धेरै धेरै धन्यवाद, यसले मलाई मानसिक शान्ति ल्याएको छ र म वास्तवमै नानलाई प्रायः कल गर्दछु किनभने कुराकानी गर्न र उनलाई आराम गर्न सजिलो हुन्छ।
- ट्रासी, लेन कोभ
कोरोनाभाइरसको खतरा टलियो
जब मेरो आमाले कसैलाई पृष्ठभूमिमा देख्नुहुन्छ ऊ नमस्ते भन्छिन् र यसले कुराकानीमा तान्छ जसरी तपाईं फोनको साथ प्राप्त गर्नुहुन्न। कुराकानी धेरै बढी आकर्षक छन्, र यसैले लामो समय सम्म।
मैले उनलाई यसका वरिपरिको ठाउँहरू देखाउन पनि प्रयोग गरें कि उनी कहिल्यै देख्न सक्दिनन् - भवन निर्माण कार्य जुन हाम्रो अपार्टमेन्टमा भइरहेको छ, मेरो छोरोको हॉकी खेल। म मात्र फोनमा अन्य क्यामेरा स्विच, चारै तिर हिंड्न र वर्णन।
जब म यो दिन्छु यो सेटअप गर्न म धेरै उत्साहित छु अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रा को चुनौतिहरु अहिले। म अप्रिलमा बेलायत जाँदै थिएँ, तर अब हुनेछैन, र यसले मेरो आमालाई त्यति निराश तुल्याउँदैन जस्तो गरी यो पहिले गरेको थियो Konnekt.
- एड्रियन कुञ्जले, न्यूयोर्क (युकेमा आमा)
भर्खरै मलाई तपाईको आमालाई बताउन चाहिएको थियो उनको पहिलो केहि कलहरुमा उनी उत्साहित भइन्। खुशीको आँसु, उनले भनिन्। हाम्रो आमाबाट एक धेरै राम्रो प्रतिक्रिया!
त्यस पछि उनले हामीलाई धेरै पटक खेलेकी छिन्, मलाई फेरि बिहान एक्सएनयूएमएक्समा। आशा छ यो उपन्यास चाँडै शान्त हुनेछ।
स्टाफले यो पनि सिके र धेरै प्रभावित भए। Tks।
- एनी-मैरी "री",--बर्षे हेजलको छोरी।
महामारीको समयमा अमेरिकी केयर होम
वाह ... हाम्रो दिन कस्तो रमाइलो थियो ... यो प्रायः नर्सि home होममा मेरो श्रीमान्को कोठामा जानु जस्तै हो ... हामीले भर्चुअल ब्रेकफास्ट, खाजा र बेलुकाको खाना सँगै खायौं। उहाँका केहि साथीहरू उनलाई भेट्न आएका छन् र म आफ्नो कोठामा आएका स्टाफलाई धन्यवाद दिन सक्षम छु। मलाई डायल गर्न मनपर्छ र ऊ शान्तसंग बसिरहेको छ जसले मेरो दिनलाई अझ शान्तिमय बनाउँछ ... धन्यवाद अन्यथा तनावपूर्ण महामारीको बखत यो अद्भुत उपहारको लागि।
- टिल्ली फ्रीम्यान, न्यूयोर्क (मायालु श्रीमती,) 83)
खुशी, महान सेवा
उसको बुढ्यौली हेरचाह सुविधा केन्द्रमा वीडिओफोन स्थापना भएकोले मैले आफ्नो हजुरआमामा ठूलो भिन्नता देखेको छु। उनी धेरै खुशी देखिन्की छिन्। म वास्तवमा प्रभाव देख्न सक्छु कि उनको प्रियजनहरु संग कि तत्काल कनेक्शन को लागी सबै फरक भयो। भिडियो कल प्रदान गर्ने आमने सामनेको सम्पर्क उनको स्थितिमा कसैको लागि यति महत्त्वपूर्ण छ। उनको अनुहारमा त्यो मुस्कान हेर्नको लागि जब हामी कुरा गर्छौं रमाइलो छ। धन्यवाद Konnekt। तपाईंको ग्राहक सेवा उल्लेखनीय छ। तपार्इंको सावधानीपूर्वक ध्यान दिनु भएकोमा धन्यवाद।
- Deanne Joosten, नाति
स्वस्थ, पुनः स्वतन्त्रता प्राप्त भयो
- डेरेक क्लैप्टन, बुढेसकाल हेरचाह स्वयम्सेवक
डेरेकको कथा पढ्नुहोस् ...
जब मैले भर्खरै नोभेम्बर 2016 को RACV रोयल अटोको मुद्दामा देखेको थिएँ Konnekt मैले सम्पर्क गरे र नतालीले जानकारीमूलक र मैत्री परिचय पछि निर्देशक जोन र कार्ललाई भेटे।
मेरो 90 बर्षे उमेरकी आमा जूनलाई प्राप्त गर्ने वरपरका छलफलहरू पछि जुन परिवार र साथीहरूसँग सम्पर्कमा रहदै एकता गर्ने उमेरबेल बक्स हिलमा बस्ने हो, हामीले एक स्थापनाको प्रबन्ध मिलायौं। Konnekt डिसेम्बर 2016 मा भिडिओफोन।
Konnekt स्थापना प्रबन्धनको अद्भुत कार्य गरे। उनीहरूले आफ्नो सीप प्रयोग गरेर युएडब्ल्यू आईटी विभागसँग कुराकानी गर्दा केही प्रारम्भिक अवरोधहरू पार गरे। यो मेरो संलग्नता बिना चिकनी सेटअप सुनिश्चित।
जुन4बर्षको लागि निवासी हो र3वर्ष भन्दा बाहिरको कल गर्न असमर्थ किनभने उनीले आफ्नो फोनमा बटनहरू थिच्न सक्दैनन्।
अब जुन भर्खर उसले बोल्न चाहेको व्यक्तिको नाममा एक 15 इन्च भिडियो टेलिफोन स्क्रीन छोयो। यो अब उनको नियन्त्रण मा राख्छ सरल र प्रयोग गर्न सजिलो टेक्नोलोजी मार्फत फेस अनुहार बैठकमा कुराकानी गर्न।
जुन अब मलाई धेरैजसो दिन कल गर्दछ र उनको समग्र कल्याण गत3महिनामा दृष्टि बाहिर सुधार भएको छ, जब उनी छनौट गर्दा साथीहरू र परिवारसँग सजिलैसँग कुराकानी गर्न सक्छिन्। जुन सधैं एक अत्यन्तै स्वतन्त्र व्यक्ति भएको छ र यसले उनलाई स्वतन्त्रता दिन्छ।
टेक्नोलोजीको यो अद्भुत प्रयोगले जूनलाई संचारमा उनको नियन्त्रण पुनः प्राप्त गर्न र एक्लो वा एक्लो महसुस नगर्न क्षमता दिएको छ। जून उनको 120 कडा समुदायको बीचमा अग्रगामी बन्न पुगेको छ र हामीले परिचय गराएका छौं Konnekt युएडब्ल्यूमा उनको प्रविधिको बाँकी समुदायको पहुँचमा ल्याउन।
मा टीम लाई धन्यवाद Konnekt जुन उनको स्वतन्त्रता को लागी।
- डेरेक क्लैप्टन, बुढेसकाल हेरचाह स्वयम्सेवक र छोरा
प्रयोग गर्न सजिलो, हाम्रो दिन उज्यालो छ
एक अर्कालाई हेर्नको लागि सक्षम हुनु अद्भुत छ अन्तर्राष्ट्रियको बावजुद। यो लगभग एउटै कोठामा भएको जस्तो छ र कलहरूमा हाम्रो दुवै दिन उज्यालो हुन्छ।
मैले कहिले सोचेको थिइनँ कि मेरो बुबाले भिडियो कल प्रणाली प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तर ठूला बटनहरूको साथ छुट्टै सजिलो इकाई प्रयोग गर्नु भनेको उसले मलाई र परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई सजिलै कल गर्न सक्दछ।
- जोनाथन एल, सिडनी
ग्लोबल परिवार अब “Konnekts ”
तपाईंको उत्पादनले जर्मनीमा मेरो आमाको जीवनलाई परिवर्तन गरेको छ, जसले अब अष्ट्रेलिया र विश्वभर आफ्ना नातिनातिनाहरू देख्न सक्दछन्।
- माइकल Mueller, समर्पित छोरा
मलेसिया, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका - खुशी परिवार
म यस अवसरलाई सबै अद्भुत धन्यवाद दिन चाहन्छु Konnekt स्टाफहरू अपमानित मद्दतको लागि तपाईका साथीहरूले हामीलाई मेरो हजुरआमाको लागि यो सेट अप गर्न मद्दत गर्नका लागि छन्। उनी अधिक जोडिएको महसुस गर्न सक्दछन् हामीलाई देख्नका लागि, विशेष गरी महान-हजुरआमा, जब हामी कल गर्दछौं।
- अमांडा सी, मलेशिया
असक्षमता हटाउन मद्दत गर्दै
Konnekt हाम्रो भाइलाई परिवार संग सम्पर्क मा रहन को लागी एक महान तरिका हो। उसले वास्तवमै यसको आनन्द लिएको छ र छिटो आफ्नो असक्षमता र कम्प्युटर अनुभव को कमीको बावजूद सेटअप प्रयोग गर्न सरल मास्टर। सुरु गर्नका लागि सहयोग ठूलो सहयोग थियो।
- एलिजाबेथ रिचर्ड्स, अष्ट्रेलिया
Konnekt भिडिओफोनले मेरा बच्चाहरू, म र मेरा आमाबुवाहरू बीचको सम्बन्ध कायम राख्छ - युरोप र ऑस्ट्रेलिया बीचको दूरी अब कम गरिएको छ। यत्ति सजिलो छ कि बटनको प्रेसबाट मेरा आमाबुवाहरू हाम्रो बैठक कोठामा हुनुहुन्छ !!!! कल्पित!
तपाईंको सहयोग अनमोल छ; द्रुत, स्पष्ट र सरल निर्देशनहरू, पेशेवर। गुणवत्ता!
- रूथ व्लाहोस, ग्रीस
105 बर्ष पुरानो
आमाले भिडियोफोनबाट धेरै आनन्द पायो। र यो उनको समुदाय मा पर्याप्त कुराकानी भएको थियो। हामी क्षमाप्रार्थी छौं हामी यसलाई धेरै चाँडो थाहा थिएन। ल्याण्डलाइनको अपरेशन एउटा समस्या हो जुन हामीले समाधान गर्न को लागी धेरै वर्षहरू खोजिरहेका थियौं।
- नोएल बी, मायालु छोरा
इ England्ल्यान्डबाट, विश्वव्यापी
मेरो आमासँग धेरै खुसी छ Konnekt उपकरण र एक वर्ष मा पहिलो को लागी संसार भर मा सबै नातिनातिनाहरु र महान नातिनातिनाहरु हेर्न र कुरा गर्न को लागी प्रबंधित गरीएको छ। केवल उजूरी यो हो कि हामीले यसलाई धेरै पहिले फेला पार्नुपर्दछ।
- रोजर बुर्ली, इ England्ग्ल्यान्ड
भियतनाम र अष्ट्रेलियामा बच्चाहरू
मैले देखे Konnekt एक वरिष्ठ पत्रिका मा। यो मेरी आमाको लागि राम्रोसँग कार्य गर्दछ जुन अशक्त छ र हल्का अल्जाइमर छ। उनी भियतनाममा छोरालाई बोलाउँछिन्, म क्वीन्सल्याण्डमा, मेरो दिदी पार्थ र विभिन्न हजुरआमा।
- डन जोन्स
डनको कहानी पढ्नुहोस् ...
यो वास्तवमै राम्रो काम गर्दछ। म अहिले हरेक दिन आमासँग कुरा गर्छु। कहिलेकाँ आईप्याडमा टिभी हेर्दा, म एक विज्ञापनको बेलामा हाई भन्छु।
तल मेरी आमाको उमेर हेरचाह सुविधा को मालिक, एन्ड्र्यू सहित केहि व्यक्तिलाई ईमेल ट्रेल तल छन्:
तपाईंसँग पार्थमा भेट्न राम्रो लाग्यो र फेरि मैले भन्नु पर्दछ कि तपाईं र तपाईंको स्टाफले मेरो आमा जूनलाई प्रदान गरेको हेरचाहबाट म धेरै खुशी छु। धन्यवाद।
म तपाईंलाई भिडियोफोन वेबसाइटमा लिंक पठाउँदै छु। उल्लेख गरिए अनुसार, म यससँग धेरै खुसी छु र अब म आमालाई लगभग दैनिक कल गर्दछु, जस्तै परिवारका अन्य सदस्यहरूले।
यो स्वत: जवाफ र तपाईं प्रेस गर्न को लागी धेरै ठुलो अक्षरमा नाम राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एक किन्नुहोस् वा भाँडा विकल्प छ।
मैले यसलाई अहिले चार महिनादेखि प्रयोग गर्दै छु र यसले राम्रो काम गर्यो। तपाईं मेरो आमालाई थाहा छ, जून एक मोबाइल फोन वा आईप्याड को उपयोग गर्न को लागी सक्षम हुनेछ। म एक समर्पित Optus मोडेम प्रयोग गर्दछ, तर यो अवस्थित Wi-Fi संग राम्रोसँग काम गर्दछ। तपाईलाई थप परीक्षणको लागि आमाको प्रयोग गर्न स्वागत छ।
डा। एडोए पनि यसमा धेरै चासो राख्थे र मैले भने कि मैले तपाईंलाई विवरणहरू उहाँ समक्ष पठाउँदैछु।
युके बुबा अन्धाको रूपमा दर्ता गरिएको छ
यो Konnekt भिडिओफोनले मलाई बेलायतमा रहेका मेरो बुवाको अवस्था जाँच गर्न र हेर्नको लागि अनुमति दिन्छ। किनकि भिडियोफोनसँग ठूलो स्क्रिन छ र यो सँधै खुला हुन्छ, मेरो बुवाले यसलाई अरू कसैलाई नचाहे पनि सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसैले जब म इच्छा गर्छु मेरा बुवालाई देख्न सक्दछु।
- बेन स्मार्ट, विदेशी छोरा
विश्वसनीय भिडियो कलि Call (युके)
बेलायतमा मेरो सासु कानून सुन्ने र स्मृति कठिनाइ छ। एक लामो समय सम्म सम्पर्कमा रहन भरपर्दो तरीकाको खोजी पछि मैले यो फेला पारेँ Konnekt भिडियो फोन।
हामीसँग कुनै इन्टरनेट वा जडान सवालहरू छैनन् र प्रणालीले हामीलाई उनी कसरी जाँदै छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन मद्दत गरेको छ।
- प्रो अलान टेलर, उपाध्यक्ष अस्ट्रलासियन टेलिहेल्थ सोसाइटी।
क्लिक गर्नुहोस् एलनको कथा पढ्नुहोस्
ट्याब्लेट (युके) प्रयोग गर्न सकेन
स्थापित गर्न र प्रयोग गर्न आश्चर्यजनक सरल, हिलमान हजुरआमा हजुरआमाका लागि र जहाँ साथीहरू र परिवारसँग कुराकानीको लागि उनको आईप्याड प्रयोग गर्न झन् झन् गाह्रो हुँदै गइरहेको थियो। अब भिडियोफोनले समाधान गर्यो कि, धेरै साथीहरू र परिवारबाट यूके वरिपरिका, यूएसए र युरोपमा पनि उनलाई बोलाउन सक्दछन्। यति सजिलो र लागत पनि प्रभावकारी ..
एक्लो भएको अनुभूतिमा ठूलो फरक पार्दै - परिवारबाट चिन्ता लिईन्छ कि उनी ठीकठाक छिन् भनेर पनि। शानदार काम 🙂.
- जेफ हूपर, वारविक्शायर युके
क्लिक गर्नुहोस् जिफको कथा पढ्नुहोस्
COVID लक डाउन केयर होम
तपाई र टीमलाई तपाईको अद्भुत काम र धैर्यताको लागि धेरै धन्यवाद ममको वीडियोफोन प्राप्त गर्ने क्रममा र धैर्यताका लागि - तपाई यस्तो पेशेवर र आश्वासनदायी संगठन हुनुहुन्छ। आमा हामीलाई सजिलैसँग सम्पर्क गर्न र हाम्रो अनुहारहरू हेर्न सक्षम हुन पाउँदा खुसी लाग्यो। हामी उनलाई देख्न पाउँदा खुसी छौं र यी अनौंठो कोविड समयमा उनको उमेरको हेरचाह गृह बाहिर हाम्रो जीवन बाँड्न पाउँदा हामी खुसी छौं। सबैलाई यस्तो सान्त्वना, विशेष गरी भिक्टोरियाको दोस्रो लकडाउनलाई ध्यान दिनुहोस्।
तपाईं सबै सुरक्षित र राम्रो रहन सक्नुहुन्छ।
- गेब्रिएल, छोरी
सुधारहरू पहिले नै हेर्दै
म तपाईंको अभिनव उत्पादसँग खुशी छु र मैले पहिले नै नर्मामा देखेको सुधारहरूको लागि धेरै आभारी छु (उनको महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक गिरावट छ)।
- अमांडा हिल, छोरी
अमांडाको कहानी पढ्नुहोस् ...
म तपाईको नवीन उत्पादनको साथ खुसी छु र यसको लागि धेरै आभारी छु सुधारहरू जुन मैले नोर्मामा पहिले देखिरहेको छु (उनी महत्वपूर्ण छ संज्ञानात्मक गिरावट).
हाम्रो कुराकानी धेरै रमाइलो छ किनकि म उसलाई चाखलाग्दो दृश्यहरूसँग ध्यान नलगाउन सक्छु, जस्तै: "हेर, यो सुन्दर फूल, कस्तो रंग?" उनी साधारण प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्षम छिन र म यसलाई अधिक आत्मविश्वास दिइरहेको देख्न सक्छु।
वा अक्सर म मेरो काखमा बिरालोको साथ कल सुरु गर्दछु ताकि हामी तुरून्त बिरालोको बारेमा कुरा गरौं, र यसले उनको अनुहारमा मुस्कान ल्याउँदछ। यो ध्वनि साना चीज जस्तै हो तर यसले मेरो अन्तर्क्रियामा पनि अधिक अर्थपूर्ण र कम निराशाजनक बनाउँदछ। म नोर्मामा फोन कलहरू डराउँथे तर अब म तिनीहरूलाई साँच्चै हेर्दैछु। यदि उनी उत्तेजित अवस्थामा छन, मसँग सधैं उनको मनपर्ने गीत अर्को विकर्षणको रूपमा खेल्न तयार छ।
म विश्वास गर्दछु कि मेरो सफलताको प्रयासमा हो जुन मैले यी नियमित कलहरू गर्न एकै समयमा दैनिक रूपमा गर्न र अलमल्याउने सर्जनशील हुनको लागि राखेको छु।
फेरी जोनलाई उत्पादन प्रदान गर्नका लागि धन्यबाद छ जस्तो लाग्छ मैले आविष्कार गर्नुपर्नेछ!
हाइड्रेशन र स्वच्छता अनुपालन
पर्याप्त पानी उपभोग गर्नु ठूलो चुनौती भएको छ ... उनको अनुहार उज्यालो भयो जब उनी कलई आउँछिन् ... मसँग उनले यो सामग्री मलाई पढेर सुनाइदिन्छ ...
स्यान्डीको कहानी पढ्नुहोस् ...
म भर्खरै तपाईले जान्न चाहानुहुन्छ कि मँ कतिको उपयोग गरीरहेको छु Konnekt प्रणाली मेरो आमा संग कुरा गर्न। यसले निर्धक्क प्रदर्शन गरेको छ। यद्यपि म हप्तामा चार दिन उसको शारीरिक रुपमा भेट्न सक्षम छु, तर मलाई देख्न नसक्ने दिनमा साधारण चीजहरू (के उनी पर्याप्त पानी पिइरहेकी छिन् वा दाँत माझिरहेकी छन्) को बारेमा अब चिन्ता लिनु पर्दैन। पर्याप्त पानी खपत उनको लागि ठूलो चुनौती भएको छ र, सम्भवतः, उनको मेमोरी केयर सुविधाका कर्मचारीहरूले यसलाई मैले चाहेको जस्तो नजिकबाट निगरानी गर्न सकेनन्। अब, म उनको प्रगति जाँच्न सक्छु र कपालबाट अर्को बोतल लिनको लागि उनलाई प्रोम्ट पनि गर्नेछु।
उनको अनुहार उज्यालो भयो जब उनी कल आउँछिन्। त्यो हेर्दा मेरो अनुहारमा मुस्कान पनि आउँदछ। उनी मलाई र पढ्न रमाईलो लाग्छिन् Konnekt भिडियो कल उनको सामाजिक अन्तर्क्रिया प्रदान गर्दछ कि ऊ अन्यथा अभाव हुनेछ। यसले मलाई त्यस्तो मनोशान्ति ल्याएको छ र हामी दुबैका लागि निरपेक्ष आशिष्‌ साबित भएको छ। यस उत्पादनको विकास गर्न र तपाईंको अद्भुत ग्राहक समर्थनको लागि धन्यबाद जब हामी प्रणाली सेटअप गर्छौं!
धेरै डिमेंशिया बिरामीहरू जस्तै, मेरी आमाको दिमाग विगतमा अडीरहेको छ। उनी मिनेसोटाको एउटा सानो गाउँमा हुर्केकी थिइन। मँ भाग्यवान थिए केहि समुदाय को लागी उनको परिवार को बारे मा केहि ऐतिहासिक दस्तावेज र फोटोहरु पाउन। तिनीहरू स्वीडेनबाट आएका आप्रवासी थिए जसले त्यहाँ बसोबास गरे र १ th औं र २० औं शताब्दीमा व्यवसाय स्थापना गरे। हामीसँग पारिवारिक लिखित कागजातहरू छन् उसलाई प्रदान गर्न रोचक र मनोरन्जनकारी किस्से रेकर्डहरू। अनौपचारिक कुराकानीहरू गर्न गाह्रो छ त्यसैले मसँग उनले यो सामग्री पढेका छन् त्यसैले म टिप्पणी गर्न वा उनलाई प्रश्न गर्न सक्ने प्रश्न सोध्न सक्छ।
एउटा चीज जुन म अरूको लागि तपाईको उत्पादनलाई ध्यानमा राखीरहेको छु अझ स्पष्ट पार्न चाहन्छुः आमाको डिमेन्शियाले उनको बुझाइलाई सीमित तुल्याउँछ कि उनी एक रिसीभर लिन वा सक्षम पनि गर्न सकेकी छैन कसैले कसैलाई त्यसो नगरीकन भनेर। । Konnekt चयनित सम्पर्कहरूको लागि यो स्वत: उत्तर क्षमताको साथ समस्या समाधान भयो।
जेन र उनको प्यारा बच्चाहरू उनको हजुरबा र उसको भिडियोफोनको बारेमा कुरा गर्छन् हेर्नुहोस्।
केयर होममा आमा - धेरै खुशी
हेर्नुहोस् डेरेकले किन उनको आमा कम एक्लो छ र उनलाई उनको भिडियोफोनको बारेमा के मनपर्दछ भनेर वर्णन गर्दछ।